Obama: Waan xakamaynayaa iibsiga hubka - BBC News Somali
Obama: Waan xakamaynayaa iibsiga hubka
Image caption Obama ayaa ka hadlay xakameynta hubka Mareykanka.
Madaxweyne Obama ayaa hoosta ka xarriiqay talaabooyin wax looga qabanayo dambiyada xagga hubka ee ka jira Maraykanka, walow ay jirto mucaaradad ku wajahan sharciga cusub ee hubka, taasoo ka imaanaysa Congresska.
Isagoo ay ag taagnaayeen qoysaskii dadkooda ku waayey iyo kuwa ay hubku dhibaateeyeen ayuu Mr. Obama sheegay in aqlabiyadda dadka Ameerikaanka ay rabaan shuruuc adag oo lagu xakameeyo hubka, kuwaasoo uu ku jiro in dib loo eego taariikhda qofka doonaya inuu hub iibsado.
Mr Obama wuxuu hoosta ka xarriiqay talaabooyinka uu doonayo inuu qaado
Laakin ururka qoryaleyda ee Mareykanka waxay sheegeen in hindiseyaasha madaxweynaha aysan ahayn kuwo baajin karay dil wadareedyadii uu liis gareeyey midkoodna.
Ku xigeenka barasaabka gobolka Texas Dan Patrick ayaa sheegay in badi dadka hubka iska leh ay ahaayeen dad mas'uul ah, in la xannibo xaqa ay u leeyihiin inay hub haystaanna ay ka hor imaanayso dastuurka Mareykanka.